Vaovao - Fampidirana milina
Ny fanodinana mekanika dia sokajy fahita mahazatra sy feno. Ny fanodinana mekanika resahina eto dia miresaka manokana amin'ny fomba fanodinana ampiasaina amin'ny fitsaboana ny vokatra amboniny. Misy ny fifandimbiasan'ny ampahany amin'ny fanodinana mekanika ao amin'ny "Forming Process", ary mila jerena tsara ny tsy fitovizany.
Betsaka ny karazana milina. Ny fomba fanodinana nentim-paharazana dia tsy inona fa ny fihodinana, fikosoham-bary, planina, fikosoham-bary, totohondry, fanapahana, fandavahana, sns. Ny ankamaroan'ireo fomba nentim-paharazana ireo dia natsofoka tsikelikely ary namboarin'ireo ivon-toeram-pamokarana CNC mazava tsara. Ny fitaovana teknolojia vaovao sasany dia manankarena tsikelikely. Voafetra ny habaka an'ity boky ity, ka tsy ho tanisiko eto daholo ireo. Ny teknika tafiditra amin'ny fanazaran-tena amin'ny famolavolana ataon'ny mpamolavola ihany no hofongarako, toy ny sandblasting, ny fanaovana sary an-tariby, ny poloney, ny fitombenany ary ny mihodina.
Ny toetra mampiavaka ny milina dia azo fintinina toy ny: hafainganam-pandeha, avo fahombiazana ary avo lenta.
Ho an'ny fomba fizotry ny machining samihafa, ny toetra mampiavaka azy ireo dia aseho amin'ity tabilao manaraka ity:
Midika ny asa tanana
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title= & oldid = 24250579 ''
Afaka mampihena ny fahamendrehan'ny tontolon'ny asa, ary mahazo miloko marevaka na fitaratra fitaratra
Izy io dia afaka manodina izay fitaovam-pitondra-tena avo lenta, avo, henjana, fahamendrehana ambony ary fahadiovana avo lenta; tsy misy hery mekanika miharihary mandritra ny fanodinana, ary mety amin'ny fanodinana ireo sangan'asa tsy dia mihetsika sy rafitra tsara izy io
Tsy afaka manova ny lamina mekanika tany am-boalohany na ny tsy fahampiana amin'ny tany izy io, manarona tsara ny lamina mekanika sy ny kilema fametahana bobongolo amin'ny famokarana, fa koa misy vokany haingo tsara
Metal, vera, seramika
Metal, seramika, vera
Fitaovana azo entina toy ny metaly
Metal, acrylic, PC, PET, vera
Sandblasting dia dingana iray izay mampiasa rivotra na rano voageja handroahana ireo sombin-javatra mafy hikapohana ny velaran'ny sangan'asa amin'ny fomba nozaraina mba hahatratrarana fahadiovana na fahamendrehana. Ny tanjona mahomby toy ny fanesorana ny harafesina, ny fanosorana ny volo, ny fanadiovana sns tsy horesahina eto. Ny fampiharana amin'ny haitao ivelany dia resahina eto. Ny dingan'ny sandblasting ankapobeny dia ampiasaina hanamboarana ny matte / matte / fasika.
Ny sandblasting dia azo ampiharina eo ambonin'ny saika ny sangan'asa rehetra ao anatin'izany ny plastika, metaly, vera, seramika, sns., Fa ny tena ampiasaina amin'ny famokarana betsaka dia ny fisehoan'ny sandblasting ny sangan'asa vy, indrindra ny vokatra vy sy aluminium.
Ny fanaovana sary an-tariby dia saika iray amin'ireo fizarana haingon-trano vy mahazatra indrindra. Ny fizotran'ny sary dia azo jerena amin'ny metaly, indrindra ny vy vy, ny seramika ary ny fitaovana plastika.
Ny fanaovana sary an-tariby amin'ny ankapobeny dia misy ny fikolokoloana ara-batana, ny sokitra CNC ary ny laser, sns. Ny vokatra azo tamin'ny fomba fanodinana samy hafa dia samy hafa be ihany koa, ary ny vidiny koa tsy mitovy.
Rolling, antsoina koa hoe knurling, dia dingana tena taloha. Ny antsy knurling dia ampiasaina hanampiana lamina fanamaivanana mahitsy na toy ny harato eo ambonin'ny sehatry ny vy vita amin'ny vy mba hampitombo ny fifandirana ary hanamorana ny fiasa. Na izany aza, miaraka amin'ny filàn'ny hatsaran-tarehin'ny besinimaro, nitombo tsikelikely ny hatsaran'ny fizotrany, ary ny fiasan'ny vokatra sasany dia lehibe kokoa noho ny asa azo ampiharina.
Ny sokitra CNC dia ny fampiasana ny CNC hanodinana sy ny sokitra azy eo ambonin'ilay sangan'asa. Ny lamosina borosy sy CD novokarina dia madio, milamina ary mahazatra. Antsoina hoe firafitra momba ny fomba fiasa ity boky ity. Ho fanampin'izany, ny firafitra voasokitra CNC dia afaka mifehy ny halaliny ihany koa mba hamokarana vokatra fanampiana.
Ny poloney dia manondro ny fampiasana ny vokatra mekanika, simika na elektrokimika mba hampihenana ny fahamendrehan'ny sangan'asa mba hahazoana faritra mamiratra sy malefaka. Ny fampiasana fitaovana polishing sy sombin-javatra manadino na haino aman-jery poloney hafa hanovana ny endrik'ilay asa.
Ny famolavolana mekanika dia fomba poloney izay miankina amin'ny fanapahana sy ny fiovan'ny plastika eo amin'ny sehatry ny fitaovana mba hanesorana ireo ampahany mihosin-dronono mba hahazoana faritra malama. Amin'ny ankapobeny, ny tehina vato solika, kodiarana volon'ondry, taratasy fotsy sns no ampiasaina, ary ny fiasan-tanana no tena ilaina.
Ny fomba famolavolana tena marim-pototra dia azo ampiasaina amin'ny fitakiana kalitao avo lenta. Ny famolahana farany tena izy dia ny fampiasana fitaovana manadinadinina manokana, izay voatsindry manoloana ny fizotran'ilay sangan'asa ao anaty ranon-javatra poloney izay misy abrasives ho an'ny fihodinana haingam-pandeha. Amin'ny fampiasana an'ity haitao ity dia azo tratrarina ny fihenan'ny Ra0.008μm, izay avo indrindra amin'ireo fomba fanaovana poloney isan-karazany. Ity fomba ity dia matetika ampiasaina amin'ny lasitra solomaso optika.
Ny famolahana fluide dia miankina amin'ny poti-tsiranoka mandeha haingana sy mahery izay entiny hanasana ny velaran'ilay workpiece mba hahatratrarana ny tanjon'ny poloney. Fomba mahazatra ampiasaina dia: fanodinana jet abrasive, fanodinana jet ranon-javatra, fitotoana hydrodynamika sns.
Ny fitotoana hydrodinamika dia entin'ny tsindry hydraulic mba hahatonga ny mpanelanelana ranoka mitondra zara-kena maratra mikoriana miverina eny amin'ny faritra ambonin'ilay workpiece haingam-pandeha. Ny mpanelanelana amin'ny ranoka dia vita amin'ny fitambarana manokana miaraka amina tsindry tsara ao ambanin'ny tsindry ambany ary afangaro amin'ny abrasives. Ny abrasives dia azo vita amin'ny vovoka silika karbida.
Fitotoana andriamby sy famolahana
Ny famolavolana manetriketrika manetriketrika dia ny fampiasana abrasives andriamby mba hamoronana borosy marihitra eo ambanin'ny asan'ny sahan'andriamby hikikisana ilay sangan'asa. Ny tombony azony dia ny fahombiazan'ny fanodinana avo lenta, ny kalitao tsara, ny fifehezana mora ny fepetra fanodinana sy ny fepetra miasa tsara. Amin'ny fampiasana abrasives mety, ny fahamendrehana amin'ny tany dia mety hahatratra ny Ra0.1μm.